Kukiyada 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Kukiyada waxaa loo isticmaalaa websaydhkan gaar ah iyo dhinac saddexaad Si loo hubiyo inaad leedahay waayo-aragnimo dhir wanaagsan, waxaad la wadaagi kartaa waxyaabaha ku jira shabakadaha bulshada, si laguu tuso adiga xayeysiisyo ku saleysan danahaaga iyo helitaanka tirakoobka isticmaalaha.
Isticmaaluhu wuu la tashan karaa nooca buskudka ay isticmaalaan Google, Google Cookie iyo Khariidadaha Google, sida ku cad qodobada ku qoran boggooda ku saabsan nooca buskudka ay isticmaalaan.
Kukiyada DoubleClick kuma jiraan macluumaad shaqsiyeed lagu aqoonsan karo. Mararka qaarkood buskudku wuxuu ka kooban yahay aqoonsi dheeraad ah oo la mid ah aqoonsiga cookie-ka. Aqoonsigan waxaa loo isticmaalaa in lagu aqoonsado olole xayeysiis ah oo isticmaale hore u soo gaadhay.; si kastaba ha noqotee, DoubleClick kuma kaydiso nooc kale oo xog ah cookie-ka iyo, weliba, macluumaadka shaqsi ahaan lama aqoonsan karo.
Own: Sessionmtsnb_referrer mtsnb_seen_2923bp_ut_session__smToken__wps_cookie_1415814194694 _ga _gat Waxay dhacayaan dhamaadka kalfadhiga. Waxay keydiyaan macluumaadka isticmaalaha iyo kalfadhiyadooda si loo wanaajiyo khibradaha isticmaalaha.
doubleclick.comDSIS-IDE-ID 30 maalmood Cookie-kaan waxaa loo isticmaalaa inuu ku laabto bartilmaameedka, kobcinta, ka warbixinta iyo uqeybinta xayeysiinta internetka. DoubleClick waxay u diraa cookie biraawsarka ka dib daabacad kasta, guji ama waxqabad kale oo keenaya wicitaan loogu talagalay server-ka DoubleClick. Haddii biraawsarku aqbalo cookie-ka, waa lagu kaydiyaa. Macluumaad dheeri ah
info (at) escape-room.online waxay diyaarineysaa isticmaaleyaasha doonaya inay ka hortagaan rakibaadda cookies-ka kor lagu soo sheegay, xiriiriyeyaal ay ujeeddadan u bixiyeen daalacayaasha adeegsigooda loo arko inuu aad u faafay:
Nidaamka cookies-ka ayaa la cusbooneysiiyay ugu dambeysay 20/05/2020